Fatịlaịza Spinner Spreaders Maka Ahịhịa Ahịhịa: Echiche --gha - Potatoes News
Omume ochie na-anwụ ike. Ya mere mee nkwenye. A na-echekarị na ndị na-agbasa ozi na-agbasa ozi na-enweghị izi ezi, nkenke, ma ọ bụ teknụzụ dị ka ngwa ngwa ndị ọzọ, na-eme ka ha ghara ịdị irè n'ọhịa. Kemgbe ụwa, nke a bụ eziokwu. Taa, Onye Ndú ohuru na-edegharị ederede na mgbasa ozi mgbasa ozi na-agbasa ozi na teknụzụ G5 spinner na-agbanwe agbanwe.
Fatịlaịza spinner spreaders maka ahihia kụrụ: myths 8
Echiche 1gha XNUMX: Mgbasa mgbasa ozi spinner adịghị mma na ịhazi ebe etinyere ngwaahịa.
Ihe onye ndu ohuru nke onye ndu ohuru nke G5 na-ewepu onwe ya site na mmeghari uzo ohuru ya na ihe ndi ozo. Site na ịgbanwee ihe nkwado ihu na ihu, na aka ekpe na aka nri, mgbe ị na-etinye ihe ndị na-edozi ahụ n'ọhịa, ndị ọrụ nwere ike nweta nchịkwa 16 swath obosara. Nke a na-enye ohere ka ọkara obosara gbasaa, njikwa ngafe ikpeazụ, yana ịgbasa ókè. Kedu ihe nke a pụtara gị? Ntinye nri edozi, mkpochapu ihe na-enweghị isi, belata ihe mkpofu edozi, ma mee ka ROI dị elu.
G5 na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ị nweta ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe n'oge, na-eme ka ị bulie ike ịmị mkpụrụ. Ọ bụrụ n’inwere ndenye ọgwụ, G5 Onye ndu ọhụụ nwere ike jupụta ya.
Echiche 2gha 80: Mgbasa mgbasa ozi igwe na-agbasa agbasa ozi enweghị ike ịgbasa karịa XNUMX 'obosara nke ọma.
Onye ndu ohuru nwere ike gbasaa ụkwụ 80 n'ụzọ dị irè na n'ụzọ ziri ezi. Ha nwekwara ike gbasaa ụkwụ 90 n'ogologo na n'ụzọ ziri ezi, yana ngwaahịa ụfọdụ, karịa karịa nke ahụ. Ihe nghota ohuru nke Onye ndu ohuru na-egbochi ikpochapu ma obu idobe ngwaahịa ma wepu ikuku site na ugbo elu. Nke a na - enye ohere ị agbasawanye, gbasaa gbasaa n'ụzọ dị irè karị, ọbụlagodi na ikuku ikuku ma e jiri ya tụnyere ngwa ngwa ndị ọzọ.
Anyị maara na ọ bụ ike ịtụkwasị ụkpụrụ n'azụ gị mgbe ị na-enweghị ike ịhụ ya na windo gị. Mana site na sistemụ nkesa nke Onye ndu ọhụụ zoro ezo n'azụ igwe ahụ, ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara oghere nsu, osisi, ma ọ bụ ugwu ndị na-emebi akụrụngwa gị. Nweta usoro mgbasawanye na-enweghị nchegbu na ndị mgbasa ozi ọhụụ.
Iji mụtakwuo maka imepụta usoro mgbasa kachasị mma yana onye mgbasa ozi ọhụụ gị, budata ngwa mkpanaka anyị na gị iOS or android ngwaọrụ.
Echiche 3gha XNUMX: Ndị na-agbasa Spinner na-eji teknụzụ pere mpe, nke na-eme ka ha ghara ịkọwa nke ọma n'ọhịa.
Onye ndu G5 ohuru nwere teknụzụ ohuru ohuru na nke na-eweta onodu a na-enwetụbeghị ụdị ya na ụlọ ọrụ fatịlaịza fatịlaịza. Ihe dị iche n’etiti ndị na-agbasa ozi G5 na ngwa ndị ọzọ ziri ezi? A na-etinye teknụzụ ọhụụ ọhụụ na nzukọ spinner n'azụ igwe, na-anọghị na ngere ngere, ugwu, na ọnọdụ mgbasa siri ike. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-agbagharị agbagharị na ahịa taa anaghị ekwe ka e tinye ha n'ọrụ, G5 nke Onye Ndú ọhụrụ na-enye ndị ọrụ ike ịgbasa nri na ngalaba 16. Ngalaba a na-ahụ maka teknụzụ na-eme ka ntinye nri kwesịrị ekwesị, na-ewepu ihe na-enweghị isi, ma na-ebelata ihe mkpofu edozi.
Onye ndu ohuru nke G5 abiala ihe eji eme ihe n’ile anya nke bu ihe omimi ma di mfe iji. Njirimara gụnyere nzaghachi ọrịa diagnostic na ọkwa ọrụ akpaaka. Cable na ngwanrọ na-eme ya nkwụnye na-egwu maka ojiji na njikwa ọ bụla dakọtara, yabụ ịkwesịrị ịmụ naanị otu usoro.
Mgbe ọnụ ọgụgụ kachasị elu na-agbasawanye oge na igwe na-agba ọsọ ruo ọtụtụ awa, ịnwe akụrụngwa na-adịgide adịgide na enyi na enyi nwere obere akụkụ na-agagharị agagharị nwere ike ime ihe dị iche.
Thgha 4. Ndị na-agbasa Spinner nwere ike itinye naanị ngwaahịa n'otu oge.
Maka ụfọdụ ndị na-emepụta ndị na-agbasa mgbasa ozi ebe ahụ, nkwupụta a ka bụ eziokwu. Emebere ndị mgbasa ọhụụ ọhụụ aka nke ọzọ iji bulie arụmọrụ gị n'ọhịa. Ihe ntinye MultiBin na-enye gị ohere igbasa ngwaahịa 4 na-enweghị onwe ya ma ọ bụ n'otu oge, na ogologo ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, na otu ngafe. Ọ bụrụ naanị na ị nwere naanị ngwaahịa abụọ na-agbasa mkpa, MultApplier insert na-atụgharị ngalaba otu hopper gị n'ime hopper-unit abụọ. Ma, dị ka MultiBin, ị nwere ike gbasaa ngwaahịa abụọ ahụ n'adabereghị ma ọ bụ n'otu oge, na ọnụego kwụ ọtọ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. Ejiri ntinye abụọ nwere njikọ nchara nchara maka ntinye dị mfe na iwepụ.
Ọ bụrụ na otu hopper maka ngwaahịa agwakọtara bụ naanị ihe ị chọrọ, ikike dị elu nke Onye Ọchịchị ọhụrụ, ndị na-agbasa ngwa ngwa ga-ahapụ gị ka ị kpuchie ọtụtụ acres kwa ụbọchị ma bulie ROI gị na igwe.
Ọ dịghị ihe na-akpata isi ọwụwa dị ka ọtụtụ ngafe n'ọhịa n'oge oke oge ịgbasa. Dịkwuo gị arụpụta site nanị inwe ihe ike ịhọrọ nhọrọ gị.
Echiche 5gha XNUMX: Mgbasa mgbasa ozi abụghị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ọnọdụ ikuku.
Oge na-adịghị agwụ agwụ na mgbalị na-aga n'ọhịa ọ bụla iji hụ na a na-eme ka mkpụrụ ya dịkwuo oke. Mana atụmatụ gị kachasị mma mere ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ike igbu ha oge na otu ịkwesịrị.
Ngwa windo na-agbanye kwa afọ. Ulo oru ugbo na-eche nsogbu nke ime obere ihe. Ọ bụ ezie na anyị niile nwere olile anya maka ọnọdụ ndị dị mma, anyị anaghị enweta ha. Mgbe ikuku ikuku na-adị, ị nweghị okomoko nke ichere itinye ngwaahịa na mpaghara. Ihe ndu ohuru nke ndu ohuru na-egbochi ime ulo ma obu idobe ihe ndi ozo ma karie ifufe. Nke a na-enye ohere ikesa ngwaahịa ka ikuku ghara ịmetụta ma nwee ike ị nweta usoro mgbasa ozi ziri ezi na nke ziri ezi ọbụlagodi na ikuku ikuku.
Ọ bụghị Onye Na-agbasa Nna Gị: A Na-enyefe Echiche readgha Gbasara Spinner
Tags: mgbasa oziakukufatịlaịza na-agbasanriOnye ndu ohurusmart ugbo
HZPC nwere afọ ojuju maka ndị na-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ
Aphids & njikwa nje - mgbochi ụmụ ahụhụ
Nkwakọ ngwaahịa nke ihe maka ihe ọhụrụ maka ihe ọkụkụ na chilled